MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Eva HAGER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Austria to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Eva HAGER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Austria to the Republic of the Union of Myanmar.
Mrs. Eva HAGER was born on7March 1957. She received PhD (Dr Phil.) in Arabic and Islamic Studies and Political Science from the University of Vienna, Austria in 1985. She joined the Austrian Federal Ministry for Foreign Affairs in 1986 and served in various capacities at the Federal Ministry for Foreign Affairs, at Austrian Embassies in Syria, Algeria, Tunisia, Mexico and Austrian Consulate General in Strasbourg. From April 2005 to August 2009, she served as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Austria to Cyprus. In December 2013, she was appointed as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Austria to the United Mexican States. She speaks English, French, Spanish and Arabic.
Mrs. Eva HAGER အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဩစတြီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
Mrs. Eva HAGER ကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မှ အာရပ်နှင့် အစ္စလာမ်မစ် လေ့လာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဩစတြီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ဩစတြီးယားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆီးရီးယား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ တူနီးရှား၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများရှိ ဩစတြီးယား သံရုံးများနှင့် Strasbourg ရှိ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတို့၌ ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဩစတြီးယားသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စ၍ မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြီးယားသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါသည်။ ၎င်းသည် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နှင့် အာရပ်ဘာသာစကားတို့ကို တတ်ကျွမ်းပါသည်။